Ireo tolo-kevitra vaovao ho an'ny morontsirak'i Women'Secret | Bezzia
Maria vazquez | 21/07/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Efa nankafy ny fialantsasatra ve ianao sa mbola ho avy? Raha mbola tsy nakatonao ny valizy, dia azonao atao ny manampy ny sasany amin'ireo vaovao. tolo-kevitra ho an'ny tora-pasika vehivavy. Tolo-kevitra maivana sy vaovao mba hankafizana ny rendrika ao anaty ranomasina sy ny diany rehefa milentika ny masoandro.
Aleo atrehana izany, rehefa vakansy dia mampiasa ireo sombin-javatra mitovy foana isika, na firy na firy na inona na inona no fonosinay. Ireo izay ahazoantsika aina indrindra sy ankafizina indrindra. Akanjo, amin'ny ankapobeny, tsotra na miaraka amina endrika falifaly toy ireo natolotry ny Womenecret ao amin'ny lahatsoratra natontany farany:
1 Dia an-tongotra antoandro
2 Mainty hatramin'ny fotony
Dia an-tongotra antoandro
Milatsaka ny hariva ary maniry handeha an-tongotra hahita zoro vaovao ianao na mankafy fotsiny ny mari-pana mahafinaritra. Toe-javatra izay anasan'ny Womenecret antsika hametraka ny tenantsika hampiadana amin'ny alàlan'ny fampifangaroana akanjo misy sakany malalaka ary kofehy malefaka fa afaka mandray ao anatiny sy ivelan'ny trano isika.
Pataloha lava sy pataloha fohy, T-shirt landihazo ary camisole tany am-boalohany no mameno ireo endrika ireo. Akanjo tsotra sy modely amin'ny voninkazo, hazo rofia ary biby amin'ny garnet mandoko, ny loko maitso ary ny ecru. Ary mba hamaranana ireo akanjo dia tsy misy tsy fahampian'ny kojakoja: fonosana fanny, kitapo raffia, kapa…
Mainty hatramin'ny fotony
Ny mainty sy fotsy no tompon'andraikitra amin'ny trano fanaovana pirinty Mainty amin'ny fototra. Ity fifangaroana izay tsy mahomby ity dia aseho amin'ny fomba isan-karazany fanontana voninkazo kely akanjo milomano fatratra, bikini ary T-shirt manana fandokoana fatratra, miaraka amin'i Snoopy ho mpitolona.
Isika izao dia mila maka ireo kilasika izay azontsika foana isika. ny akanjo ba fotsy na mainty Miaraka amin'ny akanjo mifanentana amin'ny fanangonana akanjo amoron-dranomasina (fohy, t-shirt ...) lasa safidy mety tsara izy ireo amin'ny maraina eny amoron-dranomasina. Bikini kokoa ve ianao? Ho hitanao ihany koa izy ireo, ampiarahina amin'ireo t-shirt vita amin'ny pirinty na akanjo maivana misy pirinty voninkazo.
Tianao ve ireo tolo-kevitra vaovao ho an'ny tora-pasika vehivavy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Ireo tolo-kevitra vaovao ho an'ny morontsirak'i Women'Secret